Izizathu ezili-15 zeshishini zokusebenzisa iTwitter | Martech Zone
Izizathu ezili-15 zoShishino zokuSebenzisa i-Twitter
NgoMgqibelo, Novemba 28, 2009 NgoMgqibelo, Oktobha 25, 2014 Douglas Karr
Amashishini aqhubeka nokusokola kwizizathu zokusebenzisa i-Twitter. Thatha ikopi yayo I-Twitterville: Amashishini anokuthi achume njani kwiiNdawo eziManyeneyo zeHlabathi liphela by UShell uSirayeli. Yincwadi emnandi ebhala ngokuzalwa kunye nokukhula kwe-Twitter njengesixhobo esitsha esimangalisayo samashishini ekunxibelelana ngawo.
Njengoko bendifunda le ncwadi, uShel ukhankanya izizathu ezininzi zokuba inkampani ifuna ukusebenzisa i-Twitter. Ndicinga ukuba uninzi lwazo kufanelekile ukudweliswa… kunye nengxoxo ethile… kunye nezinye ezimbalwa.
Ukuhambisa iiTikiti kunye neeOfisi -Kuba i-Twitter sisixhobo sonxibelelwano esisekwe kwimvume, yeyona ndlela ifanelekileyo yokuhambisa izibonelelo. Umhlobo olungile UAdam Omncinci ikubonile oku kwindawo yokutyela kwaye amashishini okuthengisa izindlu nomhlaba - apho indibaniselwano yeZilumkiso eziSelfowuni, iTwitter, iFacebook, iiBlogging kunye ne-syndication ziye zanceda ukukhulisa onke amashishini abaxumi bakhe… ngelixa bekweemarike ezantsi!
Ukunxibelelana nabasebenzi - endaweni yokubopha iiseyile ze-imeyile okanye ukuchitha ixesha labantu kumagumbi eentlanganiso, i-Twitter sisixhobo esikhulu sentsebenziswano. Ngapha koko, yiyo loo nto yayinjalo yokuqala eyenziwe nguOdeo phantsi kwegama Twttr (Mna no-e yehla ngokuchwetheza okuncinci kweSMS!)
Ukufumana izikhalazo zabaThengi - iinkampani zihlala zilwela ukunqanda ukuba iimpahla zazo ezimdaka zingabekwa eluntwini. Isimanga kukuba abathengi Andikholelwa kwinkonzo yeenkwenkwezi ezi-5 kwakhona. Ukunyusa okukhohlakeleyo kunye nokugxeka iinkampani ngokuqhelekileyo kuza emva impendulo yabo… okanye ukungasebenzi. Ngokwamkela izikhalazo zabathengi ekuhleni, abanye abathengi banokubona ukuba loluphi uhlobo lwenkampani wena ngempela .
Ukufumana okanye ukuthumela umsebenzi - Abaqeshi kunye nabafunayo basebenzisa i-Twitter ukuthumela malunga nemisebenzi efunwayo okanye ukuvuleka kwemisebenzi. Ngokukhangela indawo, unokufumana nokuba ujonge kufutshane kangakanani ukufumana umsebenzi kwaye ungadibanisa amanye amagama ophando lwakho.
UkuKhangela uLwazi kunye nokwabelana -Umva xa ndandiphantsi kwewaka leendwendwe, i-Twitter yayiye Olunye uhlobo olukhulu kwiinjini zokukhangela. UGoogle uyibonile le nto, ukudibanisa uluntu lwakho kwi-intanethi kwiziphumo zokukhangela. Ngokwesiqhelo, iimpendulo endizifumanayo zibaluleke kakhulu kuba abo bandilandelayo basebenza kwishishini elinye njengam.
Icebo lokuthengisa elingenayo -Ngethuba besisebenza kwiCompendium, saqala ukuqaphela inani kunye nomgangatho wezinto ezingenayo ezikhokelela kwindawo yethu ezivela kwi-Twitter zazinokwenzeka kakhulu ukuba ziguqulwe kunokhangelo. Nangona iinjini zokukhangela zisinike isixa esikhulu seendwendwe, saqala ukucebisa abathengi ukuba bangene kwi-Twitter kwaye basebenzise ukutya kwabo ngezixhobo ezinje Hootsuite or Twitterfeed.
Ukuphucula ishishini - amashishini angenanto encinci okanye angaqhagamshelani noluntu afumanisa ukuba ukubonelela ngothintelo lomntu kulungile kwishishini kwaye kuyafuneka ekugcineni abathengi. Ukuba ishishini lakho liyasokola ukubonelela ngokudibana kwabantu kwaye banobutyebi bendlala, i-Twitter yindawo elungileyo. Akudingeki ukuba ibekwe esweni imini yonke (nangona ndingayicebisa… iimpendulo ezikhawulezayo zifumana ii-oohs kunye nee-aahs), kodwa impendulo evela kwinkampani engenanto ngumntu oyena mntu une-avatar ihlala ipholile.
Ukuphawulwa komntu buqu - ecaleni kwishishini lokwazisa ngabantu kukukwazi kwabasebenzi okanye abanini bamashishini ukuba nabo bazenzele uphawu lobuqu. Ukwakha uphawu lomntu kwi-intanethi kunokukhokelela kwizinto ezininzi… mhlawumbi nkqu ukuqala iarhente yakho! Yiba nokuzingca malunga nomsebenzi wakho. Baninzi kakhulu abantu abebenexhala lokuba inkampani yabo ingacinga ntoni ukuba bazibeka elubala eluntwini ngoku bafuna imisebenzi kuba kwa loo nkampani ibabekile.
UkuSebenzela ukuKhangela kuTwitter ngeeHashtag -Ukukhangela kwi-Twitter kuya kusiba yinto eqhelekileyo. Fumana ngokusebenzisa ii-hashtag ngokufanelekileyo kwiiTweets zakho okanye kwiindlela zakho zokuzimela.
Inethiwekhi esebenzayo Unxibelelwano kwi-Intanethi sisandulela esikhulu sonxibelelwano ngaphandle kweintanethi. Andikwazi ukukuxelela ukuba mangaphi amathemba endidibene nawo nge-Twitter. Abanye bethu bayazana kangangeenyanga ngaphambi kokuba banxibelelane ngaphandle kweintanethi, kodwa kukhokelele kubudlelwane obukhulu beshishini.
Intengiso yintsholongwane -I-Twitter yeyona nto iphambili kwintengiso yentsholongwane. I-Retweet (RT) sisixhobo esinamandla ngokumangalisayo… ukutyhala umyalezo wakho ukusuka kwinethiwekhi ukuya kuthungelwano kwinethiwekhi kwimizuzu nje embalwa. Andiqinisekanga ukuba kukho itekhnoloji yentsholongwane ekhawulezayo kwintengiso ngoku.
Ukunyusa ingxowa-mali -UShel ubhala eminye imizekelo emihle yendlela iinkampani ezisebenzise ngayo ngokufanelekileyo i-Twitter kwimizamo yokupha. Isibonelelo kokubini seseshishini kunye nesisa-okoko ukubandakanyeka kwamashishini kupapashwa ngcono kwi-Twitter kunokuba babesandula ukukhankanya iwebhusayithi kwindawo ethile.
Uku-odola kwi-Intanethi Ngaphandle kwamakhuphoni kunye nokunikezelwa, abanye abantu bathatha ii-odolo zabathengi kwi-intanethi. UShel ubhala malunga nevenkile yekofu apho unokuTwitter khona kwiodolo yakho kwaye uye kuyithatha. Phole kakhulu!
Eyobudlelwane boluntu -Kususela oko i-Twitter isebenza ngesantya sokuchwetheza abalinganiswa abali-140, inkampani yakho ingahamba phambili kuye wonke umntu… ukhuphiswano, amajelo eendaba, ukuvuza… ngokuba nesicwangciso sobundlongondlongo se-PR esibandakanya iTwitter. Xa usenza isibhengezo kuqala, abantu beza kuwe. Sukuyishiya imithombo yeendaba zemveli okanye ibhlog ukuze izinto zilunge… sebenzisa i-Twitter ukuyalela kunye nokuqondisa unxibelelwano.
Nxibelelana nezilumkiso -Uba nengxaki kwinkampani yakho kwaye kufuneka unxibelelane nabathengi bakho okanye nethemba? I-Twitter ingaba yindlela enhle yokwenza oku. I-Pingdom yongeze i-Twitter Izilumkiso kwiinkonzo zayo… olunjani lona uluvo! Ngaphandle… xa i-Twitter isiya ezantsi abanakho ukusebenzisa inkonzo 😉 Isilumkiso sinokuba yinto entle kakhulu… mhlawumbi nokwazisa abathengi bakho ukuba imveliso ibuyile kwisitokhwe.
UShel ukhankanya ukuba amanye amatyala okusetyenziswa kweshishini kwiincwadi zakhe awanakubalwa ngqo kwingeniso. Nangona oku kuyinyani, ekugqibeleni banokulinganiswa kunye nembuyekezo kutyalo-mali olusetyenzisiweyo. Ndiqinisekile ukuba isebe lenkonzo yabathengi elikhangela umthamo weefowuni kunye neeTweets zingenza uhlobo oluthile lokulinganisa ukubona ukuba i-Twitter inciphisa umndilili wefowuni okhoyo kuba iimpendulo zazisiwe. Njengokuba kunjalo nge # 15… ukuba indawo yam iyehla kwaye ithunyelwe kuTwitter… emva koko aba bantu bazokungakwazi ukunditsalela umnxeba bandazise kuba bebona ukuba sele ndiwuqinisekisile umba.
tags: amatikitiizikhalazo zabathengiizaphuleloUnxibelelwano lwabasebenzifumana umsebenziurhwebo inboundukufuna ulwaziunikaukwabelanaUShell uSirayeliTwittermzantsi
Quark Ukukhuthaza ukuHanjiswa kweSisombululo esiHlangeneyo kwiiShishini lakho lokuShicilela iimfuno
Ingxaki "Akukho Ntetho"
Nov 29, 2009 ngo-12:36 AM
Wow, olu luluhlu olukhulu Douglass. "Ndilahlekelwe yintoni?" kubonakala ngathi yindlela elungileyo yokuphelisa esi sithuba njengoko yonke into endinokucinga ngayo sele ibandakanyiwe phaya phezulu. Ndiza kukuxelela into endiyiphosayo >> le ncwadi kwishelufu yam. Isithuba sesithathu namhlanje sele sikhankanyiwe ngoko ke ngokuqinisekileyo ndisinika ukuthenga kule mpelaveki. Enkosi ngolwazi. —UPawulos
Nov 30, 2009 ngo-12:53 PM
Uyabheja, Pawulos! Yincwadi entle kakhulu – ndiyavuya kuba uyifakile kuluhlu.
Nov 29, 2009 ngo-1:49 PM
Esinjani sona isithuba esoyikekayo uDouglas! Enkosi ngokusinika izixhobo ezithe kratya ukuthengisa iTwitter kunye nentengiso kwimidiya yoluntu kubathengi bethu.
Enkosi Oscar! Inika umdla into yokuba sisafuna iimbumbulu, akunjalo?
Jan 28, 2010 kwi-10: 25 AM
Ukusuka kwi-imeyile yoNxibelelwano lweShishini. FYI.
Nov 17, 2011 ngo-7:51 PM
La ngamanqaku amahle, kwaye ngokuqinisekileyo angqineke eyinyani kushishino lwethu. Kuba siyinkampani yovavanyo lwe-intanethi, abantu beza kum nge-Twitter kunye ne-Facebook kunye nemiba yabo rhoqo njengoko bebiza inkxaso yabathengi. Kwaye uyayazi into, kuba ndiziva ndiqhagamshelwe nabo kwinethiwekhi yoluntu, ndiqinisekisa ukuba isikhalazo sabo siyasihoya. Sinetoni yeempendulo ezilungileyo kule nto, kwaye kumava am, idala imvakalelo yokwenyani yoluntu. Naliphi na ishishini elingekho kwi-Twitter kule mihla lilahlekile ngendlela enkulu!